Onye Nwunye Agha - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>igwe nkuku nkume>> Jaw Crusher
Jaw Crusher, Shanghai XSM bụ ngwá ọrụ ndị na-agbazi ígwè ọrụ, Ngwá Agha Ngwá Agha, ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nke ígwè, ndị na-emepụta ihe igwe na-emepụta igwe. belt ebu, onye na-enye nri ọkụ, ihe eji ebu oku ezigara ya nkuku uhie, nkpọchi mmetụta, nnyeghari hydraulic bụ ihe na-eme ka a ghara ikpuchi ya, nke abụọ nke a obere jawcrusher, ihe na-esi ísì nyochaa nke atọ nke atọ na-ekpuchi jijiji na ihuenyo gbakwunyere nkọwa zuru oke nke ore ahụ na-eburu ya igwe mgbidi, igwe na-edozi Ngwọta nlekọta ọgwụ dị mma ndị na-arụ ọrụ magnet, igwe onu mmiri họrọ ọtụtụ ụdị mkpa ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a, ọ bụ naanị ọrụ nhazi ọ bụla, Shanghai XSM dabere n'ụdị ụdị gị bụ ngwá ọrụ m kachasị mma, Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị ga-akpọtụrụ anyị ma ọ bụ pịa aka nri akụkụ nke akara ngosi akara, ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ịchọrọ gị azịza zuru ezu.
Họrọndị na-egbu anụeme ihe iji mee ka ihe di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche. Ihe ndị a ga-etipịa nwere ike ịbụ ihe mineral siri ike, nke siri ike na nke dị nro bụ onye ume ya nwere ike ịbụ karịa 320 MPa. Ndị na-agbagharị agbaji anyị na-ejide V-shape inlet, na-eme ka arụmọrụ dị elu. Ugbu a, ngwaahịa ndị a na-aghọ ngwá ọrụ kpụ ọkụkụ kachasị mma n'ime mmepụta nkume. A na-eji ha eme ihe n'ọtụtụ ebe, dịka ngwuputa ala, ígwè ọrụ, ihe owuwu, ụgbọ okporo ígwè, nchekwa mmiri, kemịkal, na ihe ndị ọzọ.
Ọrụ Ngwá Agha Ngwá Agha na Atụmatụ
1. Mwepụ nke elu ọnụ, arụpụtawanye nke arụpụta ọrụ, ihe nhacha nke a na-agbaso, ngwa ngwa ngwa ngwa.
2. Ngwurugwu dị mfe, arụ ọrụ siri ike, arụzi dị mma.
3. Ejikọta mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri abụọ dị mfe, dị mfe ịchịkwa mmepụta.
4. Ikike ume, mmepụta ego dị ala, ogologo oge ndụ, mmekọrịta enyi na enyi.
Ụkpụrụ Ọrụ Na-eme Ngwá Agha Jaw
Eftent eccentric na-agagharị n'okpuru ihe nke ụgbọala, na-eme ka agba ahụ na-aga elu na ala. A na-agbaji ihe ndị ahụ n'ime obere iberibe site na nkedo nke nkwekọrịta, ịmịcha na ihicha. Mgbe nke a gasịrị, a na-ahapụ ihe ndị dị n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Nkà na ụzụ nkọwa nke Onye Nchịkọta Ụgha
(t / h) Ike eletrik
(KW) ndepụta akụkụ
Pee-250 400 × 250 × 400 210 20-80 5-20 15 1450 × 1315 × 1296 3
Pee-400 600 × 400 × 600 350 40-100 16-65 30 1700 × 1732 × 1653 7.2
Pee-500 750 × 500 × 750 425 50-100 40-110 55 2035 × 1921 × 2000 11
Pee-600 900 × 600 × 900 500 65-140 90-180 55-75 2290 × 2206 × 2370 16
Pee-750 1060 × 750 × 1060 630 80-160 110-320 110 2655 × 2302 × 3110 29
Pee-900 1200 × 900 × 1200 750 100-200 200-400 132 3380 × 2870 × 3330 54.5
Pee-1000 1200 × 1000 × 1200 850 195-260 220-450 160 3480 × 3876 × 3330 58
Pee-1200 1500 × 1200 × 1500 1020 150-330 400-800 180-220 4200 × 3750 × 3820 100.9
Rịba ama: Nkọwapụta a bụ naanị nkọwa, mgbanwe ọ bụla dị n'okpuruNwunye Mgbapụtangwaahịa.
Mgbasa Mgbapụta →